Guddoomiye Shariif Xasan oo si diiran loogu soo dhaweeyay Muqdisho
Buluuglee, Axad, 15ka May, 2005.
Gudoomiyaha Golaha baarlamaanka Shariif Xasan Sheekh Aaden ayaa ka soo degey garoonka dayaaradaha Deyniile ee ku yaal magaalada Muqdisho, magaala madaxda Soomaaliya. Imaatinka uu guddomiyaha barlmaanka Mudane Shariif Xasan uu maanta yimid Muqdisho waxay ku beegantahay maalin ay dadka Soomaaliyeed meel ay joogaanaba u dabaaldegayaan maalinta weyn ee lagu mamuusayo ururka dhallinyarada Soomaaliyeed SYL ee la assaasay Sannadkii 1942.
Soo dahweynta Gudoomiyaha waxaa ka qeyb galay mas'uuliyiin faro badan oo ka tirsan labada gole ee dowlada Federaalka KMG. Halkaas waxaa Mudane Shariid Xasan ka qaatay salaan sharaf cutubyo ka tirsan ciidanka qalabka sida ee Soomaaliyeed iyo cutubyo ciidan fardooleey ah oo halkaasi ku diyaar ahaa. waxaa kaloo goobtaas ciidamada baambeeyda ka tunmeen muusikada astaanta u ah dalka Soomaaliya.
Waddooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho ayaa buuxiyay dadweyne aad iyo aad fara badan ee badankooda ruxayey caleemo qoyan, waxayna ku luuqeynanayeen heesayay soo dhaweyn ah. Markuu gaariga siday guddoomiyaha soo hareer marayay u gacan haadiyay Mudane Shariif Xasan isagoo la qiirooday sharafta weyn ay u hayaan dadweynaha Soomaaliyeed.
Gudoomiyeha iyo Wafdiga la socdey ayaa u soo dhaqaaqey dhinaca xarunta Xisbiga halkaasi oo ay diyaar ku ahaayeen xubno ka tirsan labada gole ee dowlada Federaalka KMG, madax ka tirsan Gobolka Banaadir, ururada bulshada, ganacsato, odoyaasl dhaqameed, iyo mas'uuliyiin kale, iyo dadweyne aad u fara badan.
Gudoomiyeha Golaha baarlamaanka Shariif Xasan Sheekh Aaden waxaa heeso xamaasad leh ku soo dhaweeyay qaar ka tirsan hobollada Waaberi ee ku sugan dalka gudahiisa.